USA kwuputara na 2020 Afọ Ọhụrụ afọ 14 tupu Washington DC: Biba Anu Nuebu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » USA kwuputara na 2020 Afọ Ọhụrụ afọ 14 tupu Washington DC: Biba Anu Nuebu
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Fiji • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guam • Akụkọ Kiribati • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Akụkọ Samoa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ Vanuatu • Akụkọ dị iche iche
Ndi United States abanyela n'ime afọ iri nke 14 awa tupu Washington DC eme.
Ezi afọ ọhụrụ! Biba Anu Nuebu! Mgbe Guam na-agụta Afọ Ọhụrụ 2020 ọ bụ naanị 10.00 nke ụtụtụ na New York na Disemba 31. Na Guam, United States nabatara afọ iri ọhụrụ.
Agwaetiti paradaịs Guam nke dị naanị otu awa iji ụgbọ elu si Manila gbagoro na New Year USA. Kwa ụbọchị Guam na-amalite ụbọchị maka America, ha mere nke a n'etiti abalị yana ndị ọzọ, oku oku na ọtụtụ ọrụ ọ bụghị naanị na ụlọ ndị ama ama ama ezumike paradise a. Ọ bụ a mara mma n'abalị Guam.
The osimiri ga-juru n'ọnụ taa na Jenụwarị 1 na n'otu oge, New York ga-dobe bọl.
Obi ụtọ Afọ ọhụrụ kwa na Samoa na agwaetiti Krismas na Kiribati - mba ndị mbụ n'ụwa ịbanye 2020.
In Samoa, Afọ ọhụrụ Eve nwere obi nkoropụ karịa ka ọ dị na mbụ na-atụle mba ahụ ka ọ na-atụ ụjọ na-atụ ụjọ na ahụ ike na-egbu ọtụtụ mmadụ. Mgbe ọkụ na-agbapụ n'etiti abalị site na Ugwu Vaea, na-ele isi obodo, Apia anya, njedebe nke afọ bụ oge mwute na ncheta.
Ihe ngosi oku dị egwu sitere na Sky Tower amalitela Auckland, New Zealand na-eme afọ ọhụrụ. Ihe ngosi oku kachasị ukwuu na New Zealand tinyere lasers na animations, nke mbụ maka Sky Tower.
Ọchịchị Fiji bụ machibido akpa plastic dịka nke taa na mba ahụ esonye na ndepụta na-eto eto nke mba Pacific iji mee nke a.
Marshall Islands, Vanuatu, Niue, Samoa na mmachi mmachibido iwu nke New Zealand adịlarị arụ ọrụ ebe mba Pacific kachasị biri na Papua New Guinea sonyere ha na ngwụcha ọnwa na-abịa.